Imwe Deck Dungeon – Kubiridzira&Kugura – Android Cheats Matipi
Na admin | Mbudzi 28, 2021
“Sezvatakatarisira kubva kuHandelabra, shanduro yedhijitari haina chikanganiso. " – David Neumann, StatelyPlay.com
"Imwe Deck Dungeon inopa hupfumi hwehurongwa hwekutamba." – Christian Valentin, AppSpy.com
"Anoshamisa akadzika mugomba anokambaira ane sarudzo dzakakosha dzinofanirwa kuitwa pese pese." – PixelatedCardboard.com
Nharembozha dzinofona… asi haugari uine nguva yekushandisa maawa uchinatsiridza pepa rako reunhu kana kugadzirisa yako hesiti! Imwe Deck Dungeon inokutendera kuti usvetuke mukati kuti urove pasi magonhi, rolling dice, uye kukwenya baddies nemaitiro. Wana yakazara roguelike mutambo chiitiko, yakabikwa pahunhu hwayo, uye akabatwa mudhipatimendi rimwe chete remakadhi uye mashoma emadhayisi!
Imwe Deck Dungeon igomba rinokambaira mutambo wemutambi mumwe kana vaviri. Pese paunotamba, sarudza chimwe kana zviviri zveizvi 6 magamba akashinga:
• Mage – Kashoma kuti pave nedambudziko mugomba raasingakwanise kugadzirisa nechitsinga.
• Murwi – Basa raanofarira remugomba riri kurova vanomupikisa pakarepo.
• Rogue – Tarisa uchishamisika sezvaanotumira zvikara zvine maitiro.
• Mupfuri – Akarurama, brilliant, zvinouraya zvine njodzi.
• Paladin – Anotsvaka njodzi uye anodzivirira vanomutsigira kubva kuvavengi vanouraya.
• Mhute – Uku kutyora mage kwayambuka kubva kunyika yeAeon's End kubatsira kudzivirira Mynerva. Dzidza zvakawanda paAeonsEndDigital.com!
Mushure memutambo wese, magamba ako kufambira mberi kusvika kukiyinura kusvika 15 matarenda matsva, vachivaka simba ravo remitambo yeramangwana.
Pane 5 matambudziko ane ngozi ekutarisana nawo:
• Bako reDhigoni – Iyo wyvern ine ganda gobvu inogara mugomba iri inofarira magamba ayo kudivi rakatsetseka..
• Yeti's Cavern- Kana uchikwanisa kupona nemhepo dzinotonhora uye nechando chinoruma, anosemesa snowman akamirira.
• Hydra's Reef – Gurai musoro mumwe, uye mumwe anooneka! Uhu hunotyisa hunotyisa muvengi anotsvedza.
• Guva reLich – Mapoka evavengi vasina kufa, kutuka zvakaipa, nemawadhi emashiripiti. Chii chingave chisina kumira zvakanaka?
• Minotaur's Maze – Siya tariro yose, imi munopinda muno!
Zvimwe zvemukati zvinowanikwa kuburikidza neIn App Purchase:
Sango reMimvuri kuwedzera kunowedzera kaviri zviri mumutambo. Iyo inoratidzira adventures munzvimbo-nyowani dzakasvibira asi dzinouraya. Iyo yakakura network ye mossy pasi pevhu tunnel uye akabatana masango nzvimbo dzakamirira magamba ako!
• 5 magamba matsva – Alchemist, Druid, Hunter, Slayer, & Warden
• 5 makomba matsva – Nzvimbo yeIndrax, The Mudlands, Nyika Yeuturu, Matongo Anopfungaira, & The Vile Roots
• A yakakwana itsva 44-kadhi kusangana dhizaini
• Kumwe kufambira mberi kunotariswa, hunyanzvi hwekutanga, potions, & zvimwe!
Iyo Abyssal Depths yekuwedzera inowedzera rudzi rutsva rwekutyisidzira: Fiends vanokuvhima mukutsvaga kwako kwese kusvika kune mukuru. Zvinosanganisira 6 dzakasiyana Fiends, imwe neimwe ine nhanho mbiri dzekuoma. Uyezve, 2 magamba matsva emumvura anojoinha kurwa mumvura yakasviba!
Makadhi ekuwedzera ega ega:
• Caliana – Uyu faerie akafunga kuti dungeoneering inoratidzika inonakidza! Usamurega achifinhwa…
• Fanatic – Murindi akarurama ari pano kuzorova zvakaipa pose pazvinovandira!
• Muroyi – Sando yake yemashiripiti yakagadzirira kupwanya madhiri anoyerera mumadhamu anopenya!
• Cinder Plains – Iyo Hellhound yakamirira avo vasina hanya zvakakwana kuti vauye pano…
• Phoenix's Den – Chete magamba akashinga anogona kubata kupisa!
Kana wangoziva nzira yako yekutenderera mugomba, mutambo unotora pamusoro 15 maminitsi. Zvinogona kutora nguva yakati rebei kana uri kudzidza, kana kupfupika kana ukasvetukira mugomba remaspikes.
Yambiro: usasvetukira mugomba remaspikes.
Makadhi ese mune Imwe Deck Dungeon ane akawanda ane mavara mabhokisi. Rongedza dhizi rako, uye edza kuzadza mabhokisi akawanda sezvinobvira. Kune umwe neumwe hauzadzi, uchatambura mhedzisiro mumoyo nenguva! Paunenge wapedza kusangana iwe unokwanisa kudzidza hunyanzvi hutsva, kuwana chinhu chitsva, kana kuwana ruzivo rwekusimudzira gamba rako.
Tikugashirei kunyika yeOne Deck Dungeon. Adventure yakamirira!
Inoda NEON CPU uye 1 GB RAM.
Imwe Deck Dungeon chigadzirwa chine rezinesi zviri pamutemo che "One Deck Dungeon" kubva kuAsmadi Mitambo.
Kuti uwane rumwe ruzivo, tarisa OneDeckDigital.com
Chikamu: Kubiridzira uye Kubiridzira kana Matipi Matagi: CheatsHack, Deck, Dungeon
← Hondo Tafura Tennis – Kubiridzira&Kugura Poppy Playtime Huggy Wuggy – Kubiridzira&Kugura →